Ifektri Yesimanje | Jiangsu SINGNUO Chemical Technology Co., Ltd.
Isitshalo sokukhiqiza siseHuaibei base base synthesis synthesis entsha yamalahle. Yasungulwa ngonyaka we-2017. Ikhiqiza kakhulu imithi yokuthaka imithi kanye ne-pesticide, i-methyl benzoic acid, i-nitrobenzoic acid kanye nemikhiqizo yayo ephuma ku-acyl chloride amide, futhi ibambisana neNanjing University of Science and Technology kanye ne-Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences. Ngokubambisana kwamayunithi amaningi esayensi, ezemfundo nocwaningo, sithole ubuchwepheshe obuningi bokukhiqiza obunikazi.
Yamukela ubuchwepheshe bokulawulwa kwe-DCS obuphambili futhi obunokwethenjelwa. Futhi inesistimu yethuluzi lokuphepha le-SIS yamakhemikhali ayingozi akha umthombo omkhulu wezingozi futhi aqondiswe ngokucophelela izinqubo zamakhemikhali ezinobungozi, ezinganciphisa ngempumelelo amandla nokusetshenziswa kwempahla eluhlaza futhi zifeze ukusebenza kahle komkhiqizo. Ikhwalithi enhle nezindleko eziphansi.
Mayelana no-Anhui JiangTai
Imininingwane utshalomali yuan million 360 ukukhiqizwa wonyaka amathani 17,000
Ukutshalwa kwemali okuphelele kwephrojekthi ngama-yuan ayizigidi ezingama-360, futhi amandla wonyaka wokukhiqiza angamathani ayi-17,000. Umhlaba wephrojekthi ungowendawo yezimboni zamakhemikhali, ehambisana nokuhlelwa kwepaki nokuma kwezimboni.
I-ISO19001: Isitifiketi Sokuphathwa Kwekhwalithi Yango-2015
Isidlulile isitifiketi se-ISO19001: 2015 sokulawulwa kwekhwalithi, inohlelo lokulawula oluzenzakalelayo ngokuphelele.
Indawo eyanele yokugcina impahla
Ukuba nezindawo zayo zokugcina impahla kungagcina ukufakwa kwezimpahla okwanele.Izinga eliphakeme lokuzenzekelayo, ubuchwepheshe obuzinzile nobunokwethenjelwa, ukusebenza okuhle kokuphepha.
Izinsiza Zokuhlola Okuthuthukile & Isikhungo Sokulawula Esimaphakathi
Isikhungo sokuhlola sekhwalithi, sinemishini yokuhlola esezingeni eliphakeme emhlabeni, futhi sisebenzisa ukukhiqizwa okuvela ezintweni ezingavuthiwe kuya emikhiqizweni yokugcina ukuqinisekisa inzuzo ephezulu yemikhiqizo.
Esizeni, ukulawula okuphakathi kokushisa, ingcindezi, okuqukethwe kwe-oxygen, isilinganiso sokugeleza, imingcele yamanje neminye inqubo yokukhiqiza.
O-Toluoyl Chloride, I-2-Methyl-3-Nitrobenzoic Acid, I-N, N-Diethyl-3-Methylbenzamide, I-2-Methylbenzoic Acid, I-Potassium Sulfate, I-2-Methyl-4-Nitrobenzoic Acid,